डा.शर्माको बाम गठबन्धन लाई प्रश्न,मैले रक्तदान गर्दा आचारसंहिता लाग्छ ?? | www.aagopati.com Websoft University
डा.शर्माको बाम गठबन्धन लाई प्रश्न,मैले रक्तदान गर्दा आचारसंहिता लाग्छ ??
मोरङ÷आसन्न प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मोरङ ३ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार बनेका डा.सुनीलकुमार शर्मा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. शर्मा अस्पतालबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस उम्मेद्वार बनेपछि चर्चित बनेका हुन् ।
एमाले नेता चण्डीप्रसाद राई सहितको टोलीले पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य शिविर प्रहरी लगाएर उठाएपछि डा. शर्मा थप चर्चामा आएका छन् । शिविर उठाएपछि उनले भने– रोगले छटपटाइ रहेका विरामीको उपचार गर्न निर्वाचन आचार संहिता लगाउने भानुभक्त ढकाल जी पहिले जनतालाई बाँच्न दिनुहोस । जनता बाँचे भने मात्र भोट , आउँछ । उनले थपे–‘मैले रक्तदान गरेर कसैलाई बचाएँ भने पनि उहाँहरू आचार संहिता लगाएर रक्तदान गर्न पाउँदैनस भन्नुहोला । उनले हारको मानसिकताबाट एमाले बर्वराउन थालेको उल्लेख गरे ,गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूको बैचारिक सनतुलन गुमिसकेको आरोप लगाउँदै डा. शर्माले भने –स्वास्थ्य शिविरबाट सबै दलसँग सम्बन्धित कार्यकर्ताले उपचार पाइरहेको बेला प्रहरी लगाएर शिविर उठाउँदा कांग्रेसलाई होइन, स्वास्थ्य उपचार लिन चाहनेलाई घाटा भएको छ । शर्माले पाटन उच्च अदालतबाट शिविर नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको समेत बताए ।
झण्डै डेढ महिना यता दैनिक ४ सय बढीलाई घरदैलोमा उपचार सेवा दिइरहेका डा.शर्मा एमालेको लालकिल्ला तोड्ने दावी गर्छन । उनी भन्छन–म सँग नागरिकको सेवा गर्ने एजेण्डा छ । डा. शर्माले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का सम्पूर्ण परिवारलाई ३ वर्ष भित्रमा निशुल्क स्वास्थ्य वीमाको सुविधा दिने दोहो¥याउँदै आएका छन् । शर्माले भने – सरकारले एक परिवारको बीमाका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने घोषणा गरेको छ, त्यो रकम विपन्न परिवारका महँगो हुन्छ । नोवेल मेडिकल कलेजले त्यो रकमको ब्यवस्थापन गर्नेछ ।उनले सरकारले ५० हजार रुपियाँ सम्मको उपचार खर्च ब्यहोर्ने हो । तर, ढुक्क हुनुहोस, नोवेलले १ लाख रुपियाँ सम्मको उपचार निशुल्क गर्नेछ ।
कुनै नेपालका नेताले आफ्नो लगानीमा यति ठूलो नागरिक सेवा नगरेको दाबी गर्दै उनले थपे–तेह्रथुमबाट चुनाव जित्न आएका भानुभक्त दाइ कुन एजेण्डा बोकेर आउनु भएको छ ,मलाई थाहा भएन । तर म फेरि पनि भन्छु ,सरकारले बनायो भने ठिकै छ , बनाउन सकेन भने मोरङको कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे र बेलबारीमा २५÷२५ शैय्याको अस्पताल तीन वर्ष भित्रमा स्थापना गरेरै छोड्ने छु । शर्माले विपन्न, दलित तथा अल्पसंख्यक परिवारका २ सय जना विद्यार्थीलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् । देशभरका दलित,आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समूदायका झण्डै डेढ सय विद्यार्थीलाई निशुल्क अध्यापन गराइरहेका शर्मा भन्छन– मैले गुल्मी, ताप्लेजुङ, रुकुम सुनसरीका विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाइरहेको छु । चुनावका लागि हो भने मैले मोरङका विद्यार्थीलाई मात्र पढाउँथे होला नि ?सन्थाल समूदायबाट पहिलो एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गर्ने योजना एकवर्ष पछि पुरा हुने उनी बताउँछन् । मोरङको क्षेत्र नं २ मा पर्ने पथरीशनिश्चरे ६ को बराल गाउँ पूर्वका दिनेश हस्दा यतिबेला डाक्टर शर्मा कै आर्थिक सहयोगमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबीबीएस अध्ययनरत हस्दाले भने –मेरो लागि डाक्टर शर्मा ईश्वर नै हो । घामपानी छल्ने सानो झपडीमा बस्दै आएका दिनेशका बाबु जेठा हस्दा आफ्नो जीवनमा खुसी भर्ने सेतु नै डाक्टर शर्मा भएको बताउँछन् ।
आफ्नो प्रतिष्ठान जोगाइ राख्ने हो भने सात पुस्तालाई खान पुग्ने बताउँदै उनी भन्छन–म भ्रष्टाचार गर्न राजनीतिमा आएको होइन । विपक्षीहरूले स्वास्थ्य शिविर चलाएर चुनाव जित्न लागेको आरोप लगाएका छन नि भन्ने जिज्ञाषामा शर्माले भने–स्वास्थ्य शिविर सात वर्षयता निरन्तर चलिरहेको छ । विगतमा सुन्दरहरैचा,बेलबारी, डाँगीहाटमा अलि बढी चलेको थियो । तर यो अभियान चुनाव केन्द्रित होइन । २० जना विद्यार्थीलाई निशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको ब्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका शर्मा भन्छन, तर यो अवसर विपन्न र दलित अल्पसंख्यकका लागि मात्र हो ।
आर्थिक अभावका कारण कुनै सयम मोरङको बेलबारी देखि इटहरी सम्म रिक्सा चलाएको सुनाउँदै शर्माले अगाडि भने –चिसो भुईमा सुतेको मात्र होइन ,एक छाक खाए २४ घण्टा बिताएको अनुभव ताजै छ । कुनै धनाढ्य ब्यक्तिको गोठमा जन्मिएका ४४ वर्षीय डा.शर्मा आर्थिक अभावकै कारण मोरङ मै चार÷पाँच ठाउँ बसाई सरेको बताउँछन् । उनले आर्थिक अभावका कारण सामान्य रोगको शिकार भएर जीवन नै गुमाउनु पर्ने अवस्थाका चार बढी रोगी बिरामीको नोवेल अस्पतालमा आवासीय उपचार गरिरहेको बताए ।
मोरङमा बामगठबन्धनको सबैभन्दा प्रभाव क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ, जित्नु होला र भन्ने जिज्ञाषमा शर्मा भन्छन–गठबन्धनको अंक गणितले चुनाव जितिने भए किन चुनाव गरिरहनु ??जनता डामेका साढे होइनन । विचार बदलिन सक्छ ,म मतदाताको विचार बदल्ने उम्मेदवार हुँ । ढुक्क हुनुहोस , हामी २५ हजार मतान्तरले एमालेलाई चुनाव जित्छौं ।
नोवेल अस्पतालले हाल सम्म ३३ हजार विरामीको स्वास्थ्य उपचार गरिसकेको स्वास्थ्य शिविरमा संलग्न डाक्टर देबराज घिमिरे बताउँछन् । घिमिरे भन्छन–दैनिक चार बस विरामी स्वास्थ्य शिविर अस्पताल पुग्छन । ति सबैको सम्पूर्ण टेष्ट अस्पतालले निशुल्क गरेको छ । तीव्र विरामीको आवासीय उपचार गराइरहेका छौं ।